EX - ABSDF: Power & Corruption
September 1, 2013 at 6:56pm
အာဏါ နဲ့ နိုင်ငံရေး ဟာ လျှာနဲ့သွားလိုပဲ။ (သတိ) မရှိရင်ကိုယ့်လျှာကိုယ်ပြန်ကိုက်တတ်တယ်။
အခုတရုတ်ကွန်မြူနစ် တွေကိုဒုက္ခပေးနေတာလည်း ခြစားမှု (Corruption) ပဲ။
ခြစားမှုတွေအထဲမှာ Moral Corruption ဆိုတာ အဆိုးဆုံးပဲ။
Moral Compass ပျောက်သွားတဲ့ သူတွေဟာ Moral Corruption ဖြစ်တာပဲ
Moral Corruption ကိုထိန်းနိုင်တာ Principle နဲ့ Nationalism လို့ပဲထင်မိတယ်
Moral Compass အကြောင်းပြောရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို (စံ) နမူနာ တင်ပြရမယ်။
ဗိုလ်ချုပ် ဟာ Principle ရှိရုံမက တိုင်းပြည် နဲ့ လူမျိုး အတွက်
ခေါင်းထဲမှာတင်မက … အသဲထဲမှာ အစဉ်ရှိနေတယ်
ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ကို (အာဏါ) နဲ့လည်း မျှားလို့ မရ
(ငွေ) နဲ့လည်း မျှားလို့မရ ..တိုင်းပြည်အပေါ် သစ္စာဘယ်တော့မှ မဖေါက်ခဲ့ဖူး
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ဦးနု လည်း အဂတိ ကင်းခဲ့တာပဲ
လျှပ်စစ်အတွက် လောပီတ ဆောက်တော့ ဂျပန်ကုမ္ပဏီက
လဘ်စားလို့ကတော့ မင်းနဲ့ငါ အကွဲပဲ လို့ ပြောဖူးတယ်
Ambitious ဖြစ်ရင် ၊ အာဏါအကြောင်း နားလည်ရင်
ငါတို့ လွပ်လပ်ရေးရအောင်တိုက်ခဲ့ရတဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ်
မိမိတို့ရဲ့ Legacy ကိုတန်ဖိုးထားတယ်
မှားလို့ကတော့ ၀ိုင်းဆော်မဲ့ သတင်းသမားတွေကလည်း
တဖက်က check လုပ်ပေးထားတာလည်း
ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့ အားသာချက်ပဲ
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း အာဏါသိမ်းပြီး စစ်အာဏါရှင်ကိုထူထောင်တော့
အာဏါရှင်ဆိုတာ loyalty ကို ရတဲ့နည်းနဲ့ (၀ယ်) ယူကြတာပဲ
န၀တ နအဖ ခေတ်ရောက်တော့ corruption ကိုအာဏါတည်မြဲရေးအတွက်
ဒီအဆင့်ရောက်တော့… Principle တို့ တိုင်းပြည်အတွက် ဆိုတာတွေဟာ
အစိုးရပိုင်တွေကို ….မိဖဘိုးဘွားပိုင်လို ရောင်းစားကြတာ ရင်နာစရာ
အစိုးရပိုင်ဆိုတာလည်း မဆလခေတ်က မတရားပြည်သူပိုင်သိမ်းထားတာပါ
အဆိုးဆုံးက အစိုးရအာဏါနဲ့ လယ်တွေသိမ်းတာ
အာဏါရှင်စနစ်မှာ check and balance မရှိတဲ့အပြင်
သတိထား ရမဲ့သတင်းသမားတွေလည်း မရှိဖူးလေ
မိန်းမကို ပါတီရဲ့စိန်ထုပ်ကြီးကို ခိုးပေးလိုက်သေးတာပဲ
လူလစ်တယ်ထင်ပြီး (ဆီး) တောင် ခိုးမပေါက်လေနဲ့
ဖျှပ် ကနဲဆို facebook နဲ့ ဂျာနယ်တွေမှာ နံမည်ကျော်သွားမယ်
Social media ရဲ့ အားကလည်း နဲတာမှ မဟုတ်တာ
ဒီကနေ့ ဒီလှိုင်း အကြောင်းဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းဖူး
မဟုတ်ပါစေ နဲ့လို့ပဲ စိတ်ထဲကကျိပ်ဆုတောင်းနေမိတယ်
ဒီမိုသမားတွေဟာ တသက်လုံးအခွင့်အရေး မရ ခဲ့ကြတော့
လုပ်ပိုင်ခွင့် နဲ့ ခံစားခွင့် နဲနဲ ရတာနဲ့ စိတ်မထိန်းမှာ စိုးရတယ်
(လူ) ရှိရင် ဒါမျိုးကတော့ ရှောင်လို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဖူး
စနစ်က ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ဖယ်ထုတ် သွားရမှာပဲ
ကိုယ်လူကိုယ် အရေးယူရတာ နိုင်ငံရေးမှာ အခက်ဆုံးပဲ
မိမိကိုယ်တိုင်လည်း အပြစ်ကင်းမှ အောက်ကိုအရေးယူနိုင်မှာကိုး
Xi Jingping ဟာ Fujian မှာတာဝန်ကျတော့ သူ့မောင်နှမတွေကို အ၀င်မခံဖူး
သူ့အမေ Qi Xin က သူ့သားရှေ့ရေးမှာ မိသားစုက ၀န်ထုပ်မဖြစ်ရအောင် လုပ်ပေးခဲ့တယ်
သူ့အဖေ က မော်တို့နဲ့အတူ တော်လှန်ရေးမှာပါခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေးသမား
ဒုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း..family legacy ရှိတယ်
အာဏါရလာရင် အမေတွေဟာ သားသမီးကို မချစ်တတ်ရင်
ရမ်းကားတဲ့ သားဆိုးသမီးဆိုးတွေ ဖြစ်လာပြီး မိဖတွေပါ ဒုက္ခတွေ့တတ်တယ်
အောက်ဖေါ်ပြ တရုတ်ဇာတ်လမ်းဟာလည်း သာဓက တစ်ခုပါပဲ
Bo Xilia ဟာလည်း လူတော် ၊ မိန်းမကလည်း နံမည်ကျော် ရှေ့နေ
ဒါပေမဲ့ မိန်းမက ဥါဏ်မရှိတော့ သားကို အလိုလိုက်တာလွန်ပြီး
အမေလည်း လူသတ်မှုနဲ့ ထောင်ကျ ၊ အဖေလည်း အလုပ်ပြုတ် ထောင်ကျတော့မယ်
အမှန်က Bo Xilia ဟာ အာဏါအရှိဆုံး တစ်ယောက်ဖြစ်ရမှာ
နအဖခေတ်က ဆိုးမွေးတွေဟာ အခုထိရိုက်ခပ်လို့ မဆုံးသေးပါဖူး
အာဏါရှင်စနစ် က ဒီမိုကရေစီခေတ်ကို အပြောင်းမှာ
အားလုံးချက်ချင်းကြီး ကောင်းလာမှာ မဟုတ်ဖူး
ဦးသိန်းစိန်လည်း သူပြောင်းချင်သလိုပြောင်းလို့ ရမှာမဟုတ်သေးဖူး
အထူးသဖြင့် လာမဲ့ ၂၀၁၅ မှာ Capacity ရှိရုံမက
Principle ရှိပြီး တိုင်းပြည်ထူထောင်ဖို့ ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေကို
ပြည်သူတွေက ရွေးဖို့ ၊ ပါတီတွေက ရွေးဖို့ လိုတယ်လို့ထင်မိတယ်
(လူကောင်း) ဖြစ်ရုံ နဲ့ မလုံလောက်တော့ (လူတော်) လည်းဖြစ်ရမယ်ထင်တယ်
လူတော်လူကောင်း က ရှာရတော့ခက်တယ်
(ရှာ) မှလည်း တွေ့မှာလေ….
August 30, 2013 -- Updated 0632 GMT (1432 HKT)
(CNN) -- A gang rape allegedly involving the teenage son ofafamous Chinese "singing general" has caused outrage in China, unleashingatide of public anger over the behavior of so-called "princelings," the children of elite families.
This just demonstrates that the elite class is above the law in China
Sina Weibo user @woshixiaojuanmao_loving